प्रचण्डलाई टक्कर दिने नेता अहिले नेपालमा कोहि पनि छैन : झक्कुप्रसाद सुवेदी — newsparda.com
प्रचण्डलाई टक्कर दिने नेता अहिले नेपालमा कोहि पनि छैन : झक्कुप्रसाद सुवेदी
पार्टी र देशको नेतृत्व गर्न प्रचण्ड नै उपयुक्त हुनुहुन्छ। प्रचण्डलाई टक्कर दिने नेता माओवादीमा अहिले कोहीपनि हुनुहुन्न, भोलिका दिनमा आउनुभयो भने छलफल हुन्छ। तर प्रचण्डले सापेक्षिक रुपमा सही नेतृत्व गर्नुभएको छ । प्रचण्डको विकल्प पार्टीमा छैन् ।’
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टी राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा अघि बढिसकेको सुनाए । उनले भने,‘हामी राष्ट्रिय सम्मेलन भव्य रुपमा सम्पन्न गर्न गैरहेका छौं । यही मंसिर ४ गते एकै दिन वडा सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।
अब मंसिर ११ गते पालिकाको सम्मेलन हुँदैछ । संगठन, सम्पर्क मञ्चको पनि एकदैदिन सम्मेलन हुन्छ।’ उनले आगामी पुष ११, १२ र १३ गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरिनेगरि अघि बढेको सुनाए । उनले भने,‘हामीले । माओ दिवस दिनको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दैछौं ।
समयको हिसाबले अझै एक महिना छ । पार्टीले तल्लो तहदेखि प्रचार गरिरहेको छ ।’ आफ्नो पार्टीको अधिवेशनको बारेमा त्यति चर्चा नहुनुको कारण सर्वसम्मत् रुपमा वडादेखि नै नेतृत्व चयन गरिनु नै भएको सुनाए ।
उनले कांग्रेसको महाधिवेशनको बढि चर्चा हुनुको कारण शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल समूहले गर्दा केन्द्रदेखि तलसम्म चुनाव भएकोले प्रतिष्पार्ध देखिएको सुनाए । उनले आफ्नो पार्टीले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार कदम चालेको र निर्णय लिएको पनि सुनाए ।
उनले भने,‘हामी त नगरपालिकामा पनि महिला मेयर नै हुनुपर्छ भन्दैछौं । समाजको बनोटअनुसार पार्टी बनाउनुपर्छ । वडादेखि केन्द्रसम्म त्यहीअनुसार नेतृत्व बनाउनुपर्छ । ३५ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ । २० प्रतिशत युवा हुनुपर्छ । विधान बनिसकेको छ ।’
आगामी कार्यक्रम के हो रु एक वर्षको के हो ? दश वर्षको के हो ? कार्यनीति र रणनीति के हो ? यो हामीले एमालेको दस्तावेज हेरेका छैनौं । यता कांग्रेसमा विचारको मतभेद छैन् । एमालेमा वैचारिक मतभेद देखिन्छ। घनश्याम भुषालले फरक मत ल्याएको देखेका छौं । पत्रपत्रिकामा देखेका छौं । तर, बाहिर आएको छैन् ।’
उनले एमालेको १०औं महाधिवेशनपछि पनि केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष हुने सुनाए । उनले भने,‘अहिले ओलीले नै चुनाव जित्नुहुन्छ । माधव नेपालहरु त्यहाँ भएको भए रामाईलो हुन्थ्यो । विचार लागु गर्ने नेतृत्व हुनुपर्दथ्यो । अहिले त्यहाँ वैचारिक बहस हुने सम्भावना देखिँदैन ।